Sannadihii 500 ee dhimashada Leonardo da Vinci: xagga dib-u-heshiisiin Faransiis / Talyaani - WAA KU SOO JEEDI
ACCUEIL » International • DADKA & LIFESTYLE • SIYAASADDA • COMPANY 500 sano geeridii Leonardo da Vinci: xagga dib-u-heshiisiin Faransiis / Talyaani
Eliseo Emma Kamgang 3 May 2019
Maalinti saxda ahayd ee shan iyo tobnaad sanad guuradii dhimashada Leonardo da Vinci, Madaxweyne Emmanuel Macron iyo dhiggiisa Talyaaniga Sergio Mattarella waxay u dabaaldegeen astaantii saaxiibtinimada Franco-Talyaani, ka dib bilo ay ka taagnaayeen xiisadda u dhaxeysa Paris iyo Rome taasoo sii kaceysay. Xusuusin kooban oo Safiirka Faransiiska.
2 May 1519, sawir-qaade iyo saynisyahan aad u qurux badan (kuna dhashay 1452) wuxuu ku dhintay qalcaddii Clos-Lucé d'Amboise, oo ku taal Touraine, saddex sano kadib markii uu Faransiiska ku martiqaaday King Francis I.
Emmanuel Macron iyo Sergio Mattarella ayaa qado ku qaatay Clos Lucé, qalcaddii halkaas oo farshaxanku ku qaatay saddexdii sano ee ugu dambeysay noloshiisa. Labada madaxweyne ayaa markii ugu horreysay ku soo wada ururay qabrigii halyeeyga Florentine ee qalcaddii boqoro ee Amboise. Ka hor kulan galabtii lagu qabtay Chambord oo ay wehliyaan 500 dhalinyaro Faransiis iyo Talyaani isugu soo ururay aqoon isweydaarsiyo ay hogaaminayaan shakhsiyaad ka socda adduunka sayniska iyo dhaqanka.
Marka laga hadlayo weynaanta hal-abuurka Renaissance, maahmaahdu way sii yaraan kartaa. Emmanuel Macron iyo Sergio Mattarella waxay wadaagaan qiime isku mid ah, jamhuuriyad, dimuqraadiyad iyo reer Yurub.
« Xiriirka ka dhexeeya Faransiiska iyo Talyaani, ee u dhexeeya Faransiiska iyo Talyaaniga, ayaa ugu fiican. Saaxiibtinimadan, oo aniga iyo Madaxweyne Macron aan xaqiijinayno maanta, waa saaxiibtinnimo wax walba u istaagi kara Madaxweynaha Talyaaniga ayaa yidhi, oo ay wehelinayaan gabadhiisa.
Iska ilaali snags
Iska caabinta wax walba, oo ay ku jiraan snagskii ku guuleystey labada dowladood: taageerada ka socota Matteo Salvini iyo Luigi di Maio ilaa "jaakadaha hurdiga ah", socdaalka, iyo ilaa muran dhawaanahan ka taagnaa amaahda Louvre ee sawirrada hufnaanta ee Renaissance. Faransiisku waxkasta kuma uu dhawaaqi karo Xoghayaha Arimaha Dhaqanka. Amboise, madaxweynaha Faransiisku wuxuu diray isla fariintii uu la kulmay dhigiisa.
« Waqtiyadan aadka u weyn ee ay bini-aadamku isu beddeleen si weyn, waa caqliga iyo sida ugu wanaagsan ee labada dal ee kale ee iskood isu keenay. Waana sababtaas sababta xidhiidhka ka dhexeeya waddamadeenna iyo muwaadiniinteennu u yahay mid aan la xakamayn karin, waa in ay aad uga xoog badan tahay uguna qoto dheer tahay heerkeenna. Ayuu yidhi Emmanuel Macron.
Laakiin tan ka dib maalinta dhaqanka iyo saaxiibtinimada, murugada si dhakhso leh ayey ugu laaban kartaa jaranjarada hore, toddobaadyada 3 ee doorashooyinka Yurub.
Maraykanka: Facebook ayaa tirtira xisaabaadka shakhsiyaadka muranka dhaliya
500 sano ka hor, Leonardo da Vinci wuxuu ku dhintay Amboise